Ndozi Bios | Ebe gị iji zere mmejọ ma dobe PC gị
Etu aga esi ndabere ma weghachite ndabere na desktọọpụ ndabere na Windows 10
KB4464455 Windows 10 Version 1809 Mee 17763.107 - 13 Nov 2018
Otu esi ahọrọ ụbọchị iji kwụsịtụ mmelite na Windows 10
Esi na-agụ ma na-emekọ na ihuenyo site na iji òké na Windows 10
Download Mara mma Norway Windows 10 Isiokwu
Etu aga esi dozie AsusTPcenter.exe Bad Image Na Windows 10
ọhụrụ ozi ọma
Otu esi eji Ok Google kwa ụbọchị | Hazie ngwaọrụ gị ozugbo enwere ike
biosexpertopc 2022 2022 Hapụ ikwu
Ok google bụ ngwa eji eme ihe kwa ụbọchị, nke ị nwere ike ijikwa ngwa mkpanaka gị n'ụzọ dị mfe, ngwaọrụ ndị na-eji ihe enyemaka na-ekewa ụzọ abụọ: Ngwaọrụ na-etinye ok google Devices na...
Esi emeghe faịlụ JNLP
biosexpertopc 2020 Hapụ ikwu
Ka ọ dị ugbu a, ngwaọrụ elektrọnik nwere faịlụ na ngwa emepụtara n'ụdị dị iche iche. Agbanyeghị, mgbe mmemme agụ akwụkwọ na-efu, ọ gaghị ekwe omume ịrụ ọrụ ụfọdụ ma ọ bụ lelee ụfọdụ faịlụ site na ihe nchọgharị weebụ kachasị amasị gị. Nke a bụ ikpe na faịlụ ...
Kedu ka ị ga - esi chọpụta adreesị IP nke mmadụ
Ikekwe ọ dị oge ụfọdụ ịnwa ịchọta adreesị IP nke mmadụ ma ọ nweghị isi. Agbanyeghị, iji ozi ị ga-agụ n’isiokwu a, ị ga-ama otu esi enweta IP mmadụ na obere sekọnd ole na ole ...
Otu esi edekọ Wii egwuregwu
Daysbọchị ndị a, ọtụtụ egwuregwu vidio na-enye ndị na-akwado ha ikike nghọta ọhụrụ. Nke ahụ bụ, ha na-ahapụ ha ka ha melite nka metụtara nhazi ozi, nke pụtara iji nchekwa, nlebara anya, nghọta, ...
Etu esi ede NTFS site na iji komputa Mac OS
Ugbu a, e nwere ọtụtụ ụdị nke formats maka draịva ike na nchekwa nkeji nke Mac OS kọmputa. Otu n'ime ụdị ndị a kacha ewu ewu bụ NTFS na n'isiokwu a anyị ga-ekwu maka nke a. Ọzọ, anyị ga-akọwa etu ...
Mara ma nọmba akpọchiri akpọrọ gị
Ọ bụrụ n’ịchọta onwe gị ka ị na-agụ edemede a, ọ bụ maka n’ọtụtụ oge ị jụworo onwe gị ajụjụ a: Otu esi amata ma nọmba akpọchiri akpọọla m? Luckily, taa ị ga-achọta azịza na ị ga-enwe ike ịmata niile uzo ozo i nwere ...
Otu esi edetuo CD na PC gi
Iomi CD na PC bụ ihe a na-eme ugboro ugboro, ebe ọ bụ na enweghị ọtụtụ ụzọ iji chekwaa ozi. Agbanyeghị, dịka ihe niile si malite, nke a echefuru ụfọdụ ndị ...
Ngwa idetuo kọntaktị site na iPhone gaa SIM
Ọ bụrụ n’ịchọrọ mbupụ kọntaktị iPhone na SIM ma ị chọpụtala na enweghị nhọrọ maka nke a, ị kwesịrị ịma na ọ ga-ekwe omume ịme ya site na ịwụnye ngwa. Ihe kachasị mma na nhọrọ a bụ na ị nwere ike ihichapụ ngwa arụnyere ozugbo ...
Esi ewepu Fortnite
Mgbe iwepu ngwa na kọmputa ma ghara iji usoro kwesịrị ekwesị, a na-enwekarị faịlụ rụrụ arụ na-ewe ohere ma na-emetụta ọrụ ya. Nkọwa nke egwuregwu vidio na-eme ka ọnọdụ a pụta, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ Fortnite gbaa mbọ ...
Etu esi melite map TomTom n'efu
Usoro igodo maka ugbo ala na-ejiwanye uwa nile, iji mezuo ochicho a otutu ngwa di na ahia. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ngwa ndị a dị ka TomTom nke nwere ọ ...ụ dị elu ...
Esi hazi TP-LINK Extender
Ọ bụrụ n’inwere ngwaọrụ TP-LINK Extender ma ị maghị etu esi ahazi ya, ị nọ n’ebe kwesịrị ekwesị, n’ihi na ebe a ị ga-ahụ usoro ị ga - agbaso iji nweta ya Mgbe ị nwere ebe n'ụlọ gị ma ọ bụ ọrụ ebe wireless Internet mgbaàmà ...
Mepee kaadi micro SD ederede ederede
Ọtụtụ ndị mmadụ taa nwere nsogbu n copomi na ịkwagharị faịlụ na kaadị micro SD. Nke a bụ n'ihi nchedo ederede nke ngwaọrụ ndị a nwere elektrọnik. Okwesiri ighota na ihe edere ederede a bu ihe nchebe nke ...
Budata Skype maka n'efu
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa maka izipu ozi na oku site na ngwaọrụ gị, ọ dịghị ihe dị mma karịa nbudata Skype n'efu. Nke ahụ bụ, ngwa a abụrụla otu nhọrọ kachasị mma iji gwa ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị okwu ...
Ngwa eji mee ihe iji mepụta Animoji gam akporo
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ gam akporo ma ịchọrọ ịma otu ị ga - esi jiri ya wee mepụta Animoji dị iche iche, ị nọ n’ebe kwesịrị ekwesị. N'ihi na taa anyị ga-akọwa ngwa dị iche iche ị nwere ike iji mee ha. N'otu aka ahụ, ị ​​ga-amụta usoro ...
Muta otu esi edeputa DVD echekwara
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ị ga-esi detuo DVD echekwara ogologo oge ma ị nwebeghị ihe ịga nke ọma, ị rutela na blog na-egosi. N'ihi na taa ị ga-ama mmemme dị mkpa iji nweta ya, malite na ngwaọrụ ndị kachasị eji na Windows iji ...
Otu esi ehichapu nọmba SIM
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịnwe nọmba ekwentị nke ndị ị na-adịkwaghị ekwu okwu na ngwaọrụ gị yana ọbụlagodi na ihichapụ ha ha na-apụta, ị ga-ahụ azịza ya. N'ihi na anyị ga-akọwa otu ị ga-esi hichapụ kọntaktị SIM na ngwaọrụ gam akporo site na ...
Etu esi ewunye Kali Linux
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịchọ otu esi etinye Kali Linux ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị, n'ihi na n'isiokwu a, ị ga-ahụ otu esi enweta ya. Taa, ọ bụ ọtụtụ ndị ọrụ ịwụnye sistemụ arụmọrụ na kọmputa ha iji nyochaa nchebe ...
Etu esi amata ụbọchị ịzụta ekwentị
Ọ bụrụ n ’ọtụtụ oge ị chọọ ozi na Otu esi amata afọ nke ekwentị? ma unu enwebeghị ihe ịga nke ọma, taa ị nọ n'udo. N'ihi na n'isiokwu a anyị ga-aza ajụjụ a, na-enye gị nkọwa niile gbasara ụzọ dị iche iche ...
Ọ bụrụ n'ị bụ otu n'ime ndị hụrụ oge Cretaceous n'anya ma jiri otu ihe dinosaurs hụ ya n'anya yana dịkwa ka egwuregwu vidiyo, post a bụ maka gị. N'oge na-adịbeghị anya, e wepụtara egwuregwu vidio ọhụrụ, Jurassic World Evolution, nke, ...
Etu esi ebudata egwuregwu efu na Nintendo 3DS
N’oge ugbu a, igwu egwuregwu vidio na-abụwanye akụnụba n’ihi agam n’ihu na teknụzụ. N'ihi ya, ọ bụghị naanị na ị ga-erite uru site na onyinye mgbe niile, mana ọ ga-ekwe omume ibudata ọtụtụ egwuregwu dị mma n'efu site n'ọtụtụ ...
Onye Mmepụta site na ọrụ, nwee mmasị na ngwaike. Kemgbe m dị afọ 11 na-arụzi kọmputa. Want chọrọ ịmatakwu? Kpọtụrụ anyị
Mmezi Bios 2019
EGO Blog site Gburugburu